बामपन्थिको दुई तिहाई मत आउने सम्भावना : रामबहादुर थापा
मंसिर २१ ।
पूर्व सांसद एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता रामबहादुर थापा बादलले बामपन्थिको दुई तिहाई मत आउने सम्भावना बनेको वताएका छन् । प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा निर्वाचनमा बादलले भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालय मतदानस्थलबाट मतदान गरेका हुन् । मतदान गरेपछि सञ्चारकर्मीहरु संग कुराकानी गर्दै बादलले जनताको चाहना विकास र सम्बृद्धि भएको वताएका छन् । राजनितिक स्थायित्वका लागि बामपन्थि उम्मेदवारहरुको विजय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । निकट भविष्यमा नै बामपन्थिको सरकार बन्ने भन्दै उनले बामपन्थि सरकारले जनताको चाहना पुरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । समानुपातिक तर्फ बामपन्थिको आशा गरेजति मत आएको अवस्थामा दुई तिहाइ सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ आवश्यक भएपनि सरकार निर्माणमा बहुमत भए पुग्ने उनले जानकारी दिए । उनले यअसघिको संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए भने २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालिन क्षेत्र नं.२ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
त्यसैगरि चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ प्रदेश सभा २ का लोकतान्त्रिक गठबन्धनका प्रदेश सभा उम्मेदवार प्रकाश अधिकारीले नारायणी नमुना मावि मतदानस्थलबाट मतदान गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता अधिकारीले लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विजय सुनिश्चित भएको दावि गरेका छन् । नारायणी नमुना मावि मतदानस्थलबाट ५ हजार ५ सय ५५ मतदाताले बिहिबार मतदान गरेका छन् । दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा निर्वाचनमा चितवनमा रहेका ३ ओटा निर्वाचन क्षेत्रको १ सय ६१ मतदानस्थलको ४ सय ८ मतदान केन्द्रबाट ३ लाख ५४ हजार ३६ जनाले मतदान गरेका छन् ।
एक सय वर्ष नाघेका दुई जना ज्येष्ठ नागरिकले चितवनमा मतदान गरे
दोस्रो चरण अन्तरगत बिहीबार चितवनमा भएको मतदानमा एक सय वर्ष नाघेका दुई जना ज्येष्ठ नागरिकले मतदान गरेका छन् । चितवन क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत पर्ने भरतपुर २ मा रहेको बालकुमारी माध्यमिक विद्यालयबाट दुई जना ज्येष्ठ नागरिकले मतदान गरेका हुन् । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २ क्षेत्रपुर घर भएकी एक सय १५ वर्षे डल्लीमाया बसेल र एक सय वर्षे लिलाहरि पोखरेलले नारायणगढबाट मतदान गर्नुभएको हो । एक सय १५ वर्षे बसेलले मतदाता परिचय पत्र नम्बर १६७००८५४ बाट बालकुमारी माविको मतदान स्थलको ख केन्द्रबाट मतदान गर्नुभयो । त्यस्तै एक सय वर्षे लिलाहरि पोखरेलले बालकुमारी माविको मतदान स्थलको च केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको हो । बसेललाई मतदान गराउनको लागि उहाँका कान्छा छोरा मानबहादुर बसेल र कान्छी बुहारी अनिता बसेलले मतदान केन्द्रसम्म ल्याउनुभएको थियो । पोखरेललाई मतदानको लागि उहाँका छोराहरु अशोक पोखरेल र शान्ताप्रसाद पोखरेलले मतदान स्थलसम्म ल्याउनुभएको थियो । आफू जिवित छदाको अवस्थामा नै समृद्ध नेपाल देख्न पाए आत्माले शान्ति पाउने दुवै ज्येष्ठ मतदाताले प्रतिकृया दिएका थिए । बालकुमारी माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा सात हजार ७२ मतदाता रहेका छन् । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २ मा बालकुमारी मावि मात्रै मतदान स्थल रहेको छ भने उक्त स्थलमा सात वटा केन्द्र रहेका छन् ।
चितवनमा शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान सम्पन्न
चितवनमा शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान सम्पन्न भएको छ । दोस्रो चरण अन्तर्गत बिहीबार सम्पन्न भएको मतदानमा जिल्लाका करिब ७० प्रतिशत मतदाताले भाग लिएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनले जनाएको छ । चितवनबाट विभिन्न हेभीवेटका उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा मतदाता र उम्मेदवार भएकाले समेत राष्ट्रिय रुपमा चितवनले ध्यान खिचेको छ । साँझ पाँच बजे मतदान सकिएपछि मतगणना स्थल भरतपुर १० मा रहेको चितवन माध्यमिक विद्यालयमा मतपेटिका लैजाने काम भइरहेको छ । चितवनको सुगम ठाउँका मतपेटिकाहरु चाँडै नै मतगणनास्थल आइपुग्ने भएपनि बाँदरझुला, इच्छाकामनाका मतपेटिका आउन ढिला हुने भएकाले शुक्रबार बिहान मात्रै मतगणना सुरु हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृत कुलप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।
चितवनमा तीन वटै प्रतिनिधिसभा र छ वटा प्रदेशसभाको मतगणना एकै पटक सुरु गरिने भएको छ । शुक्रबार बिहानबाट मतगणना सुरु भएर चार दिनमा प्रत्यक्ष तर्फको र २८ गतेसम्म समानुपातिक तर्फको पनि मतगणना सक्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको भनाइ छ ।
चितवनको तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा तीन लाख ५४ हजार ३६ मतदाता रहेका थिए । बिहीबार साँझ सर्वदलीय छलफल पछाडि मतगणना आचारसंहिता निर्माण गरेर मतगणना सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
चितवनका सबै मतदान केन्द्रमा मतदान सुरु ,माओवादी अध्यक्ष दाहालले शिवनगरस्थित आधारभुत विद्यालय शान्तिपुर मतदान केन्द्रबाट गरे मतदान
तस्वीरः कोमलचन्द्र भगत ।।।
दोस्रो चरण अन्तरगत आज चितवन सहित ४५ जिल्लामा भैरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा चितवनमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मतदान गरेका छन् । वाम गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि चितवन क्षेत्र नं.३ बाट उम्मेदवार बनेका दाहालले भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१४ शिवनगरस्थित आधारभुत विद्यालय शान्तिपुर मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् । विहान सात बजे नै मतदान गरेको प्रचण्ड यस मतदान केन्द्रको मतदान गर्ने पहिलो मतदाता हुन् । आज बिहानैदेखि सुरु भएको मतदान कार्यमा मतदाताहरुको उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत पहाडी र हिमाली गरि ३२ जिल्लामा मंसिर १० गते निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी रहेका ४५ जिल्लामा अहिले मतदान भइरहेको छ । मतदान भइरहेका जिल्लाहरुको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । मतदान केन्द्रको सुरक्षा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीले गरेका छन् भने त्यस भन्दा बाहिर सशस्त्र प्रहरी रहेको छ । सुरक्षाको बाहिरी घेरामा नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ । विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा क्याम्प नै खडा गरेर सेनाको टुकुडी राखिएको छ । कुनै पनि मतदान केन्द्रमा अप्रिय घटना हुन नदिनको लागि उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको स्थानीय सुरक्षा समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । चितवनमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि चार वटै सुरक्षा अंगका कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । त्यस्तै सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी समेत सबै मतदान केन्द्रमा परिचालन गरिएको भट्टले जानकारी दिए ।
जित सुनिश्चित छ । विक्रम पाण्डे
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री एवंम राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)का केन्द्रीय उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२७ स्थित जानकी माध्यमिक विद्यालय मतदान स्थलबाट मतदान गर्नुभएको छ । उहाँ यसअघि पनि सोही मतदान स्थलमा मतदान गर्नुभएको थियो । चितवन क्षेत्र नं.३ कै प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेद्वार समेत रहनुभएका मन्त्री पाण्डेले आफ्नो जित सुनिश्चित भईसकेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।
चुनावसँगै देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ ।: प्रचण्ड
चितवन, मंसिर २१ –
तस्वीर ः कोमल चन्द्र भगत।–
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावसँगै देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।मतदान गरेलगत्तै संचारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै निर्वाचन पछि देशमा पाँच वर्षे स्थायी सरकार बन्ने धारणा राखेका छन् । बिहान सात बजे चितवनमा मतदान गरेका दाहालले लामो समयपछि भएको निर्वाचन लगत्तै संघियता कार्यान्वयनमा गएको बताएका छन् ।। उनले भने ‘अब देशमा स्थायीत्व र विकास चाहिएको छ । देश संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र तर्फ गयो । हामी सम्वृद्वि को तयारीमा लगौं ।’एक फरक प्रसङगमा दाहालले पार्टी एकता गर्ने संकल्प गरेर एमाले, माओवादी गठबन्धन गरेको हो । निर्वाचन पछि पार्टी एकता गर्ने सबैले प्रतिबद्वता जनाएका छौं ।उनले नेपाली कांग्रेसमा पनि एकता अवश्यक भएको प्रतिक्रिया दिए । दाहालले भने, ‘उहाँहरुको पनि एकताहोस । म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलसँग निरन्तर संवादमा छु ।’
चितवन क्षेत्र नं ३ मा अध्यक्ष दाहाल वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन् । दाहाल पत्नी सीता दाहाल र कान्छी छोरी गंगा दाहालले पनि सोही केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको छ भने माइली छोरी भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले निमावि सुन्दरबस्ती मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेकी छन् ।
चितवनमा मतगणनास्थलमा १२ ओटा समुह बनाएर मतगणना गरिने
मतगणनास्थलमा १२ ओटा समुह बनाएर मतगणना गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत कुल प्रसाद शर्माले वताएका छन् । चितवनमा निर्वाचन प्रतिनिधि सभाका ३ ओटा र प्रदेश सभाका ६ ओटा क्षेत्रहरु रहेका छन् । ३ ओटा निर्वाचन क्षेत्रहरु मध्ये एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई सिफ्टमा ४ ओटा मतगणकहरुको समुह रहने शर्माको भनाइ छ । यहांको व्यवस्थापन राम्रो र जनशक्ति आवश्यकता अनुसार परिपुर्ति भएकाले प्रत्यक्ष तर्फका मतपत्रहरुको ४ दिन भित्रमा मतगणना सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए । समानुपातिको मतगणनाको लागि ४ दिन लाग्ने वताउंदै शर्माले ८ दिनमा सम्पुर्ण मतगणना कार्य सम्पन्न गरिने वताए । मतगणनाका बेला सुरक्षाको भरपुर व्यवस्था हुने भन्दै शर्माले त्यसको चिन्ता नलिन आग्रह गरेका छन् । यस पटकको मतगणना छिटो र शान्त वातावरणमा सम्पन्न हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । स्थानिय तहको निर्वाचनका बेला चितवनबाट नै मतगणनामा तारजाली प्रयोगको सुरुवात भएको स्मरण गर्दै उनले सौहार्द वातावरण एवं सुधारका लागि मतगणनामा तारजालीको प्रयोग हटाइने उनले जानकारी दिए । मतगणनामा तारजालीको प्रयोग गरि कारागार जस्तो नबनाइने उनको भनाइ छ ।
आवाज, कुल प्रसाद शर्मा, मुख्य निर्वाचन अधिकृत चितवन
चितवनको मतगणनास्थल चितवन माविमा व्यवस्थापनका कामहरु सम्पन्न भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कुल प्रसाद शर्माले वताएका छन्् । मतगणनास्थलमा सरसफाइ, कार्पेट विछ्याउने, खानेपानि, विजुली लगायतका व्यवस्थापकीय काम भएको शर्माले जानकारी दिए । जिल्ला सुरक्षा समितिको समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्थापनका कामहरु पनि भइरहको उनले वताए । समाचार संकलनका लागि आउने पत्रकारहरुलाइ टेण्टको पनि व्यवस्थापन गरिने उनले वताए । दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभाको निर्वाचन बिहिबार विहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म हुने छ । बिहिबार निर्वाचन अधिकृत, सुरक्षा समितिका प्रतिनिधिहरु निर्वाचन केन्द्रहरुमा जाने भएकाले मतगणनास्थलको व्यवस्थापकिय कार्यहरु बुधबार नै भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत शर्माको भनँइ छ । मतगणनास्थलको व्यवस्थापनमा बुधबार मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृतहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक, निर्वाचन अधिकारी लगायतको मतगणनास्थलमा उपस्थिति रहेको थियो ।